Ciidamadda Nabad sugida Sirdoonka Qaranka oo Gacanta ku dhigay Xubin ka tirsan Kooxda Daacish – Walaal24 Newss
Ciidamadda Nabad sugida Sirdoonka Qaranka oo Gacanta ku dhigay Xubin ka tirsan Kooxda Daacish
November 14, 2018	Off	By walaal24
Ciidamada Nabad sugida Sirdoonka Qaranka oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay Xubin ka tirsan Kooxda Daacish, sida uu sheegay Taliska NISA.
War kooban oo kasoo baxay Taliska Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in qabashada xubinta ka tirsan Daacish ay dhantaaleyso marinada dhaqaale ee ISIS maadaama uu u qaabilsanaa kala gudbinta Dhaqaalaha.
“Ciidamada Amniga ayaa fiidnimadii xalay oo ku beegan 13-ka Nofembar 2018, Magaalada Muqdisho kasoo qabtay shakhsi Ururka ISIS ee Soomaaliya iyo Xagjirka wadamada kale ka jira u kala gudbin jiray dhaqaalaha, Qabashada shakhsigan ayaa dhantaalaysa marinada dhaqaale ee ISIS”.ayaa lagu yiri war kooban oo lasoo dhigay Twitterka NISA.
Magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka waxaa ka socda Howgalo ay wadaan Ciidamadda Hay’adda nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka iyagoona gacanta kusoo dhigay Horjoogayaal iyo dagaalamayaal qorsheynayay inay waxyeelo u geystaan Shacabka Soomaaliyeed.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta Cod u qaadayo ku noqoshada Miisaaniyadda Dowladda 2018.
Wasiirka waxbarashada XFS iyo madaxa hay’adda DFID oo kala saxiixday heshiis lagu taageerayo waxbarashada gabdhaha Soomaaliyeed
Shirka Tubta Siyaasadda loo dhanyahay ee Hirshabeelle oo looga hadlay ajandayaal dhowr ah
Ciidamada Qaranka iyo Saxiibadood howlagal ay siwada jir ah uga fuliyeen deegaan lagu magacaabo xiriirro oo ka tirsan isku shuban.
Dhageyso: Madaxweyne Xaaf “Galmudug waa xor barlamaan bay leedahay wasiiro bay leedahay cidii shaqsiyaad ah oo banaanka istaageysa iyada ayey u taallaa”
Dhageyso: Gudomiyaha Maxkamada Gobolka oo sheegay in uu ka shaqayn la,yahay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha Shacabka
Dhageyso: Sheekh Shariif iyo Xasan sheekh oo u socdeen Baladweyne oo ku xayirmeen Garoonka Muqdisho
Daawo: Xaflada lagu soo dhaweynayay Gudomiyaha cusub ee Golaha Shacabka oo lagu qabtay magalada Minneapolis
Daawo: Madaxweyne Dani “dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka tanaasul lahayd, maroorsiga iyo isku’keli-yeelidda talada dalka”
Daawo: Ra’iisul wasare Khayre oo tababar u furay ciidamadii dhawaan laga qarameeyay deegaannada Galmudug